ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျး ခဈြမငျးသူရဲ့ ဇနီးဖွဈသူအား သှားရောကျတှဆေုံ့ နှဈသိမျ့ပေးရငျးနဲ့ အလှူငှလှေူဒါနျးခဲ့တဲ့ ထူးခနျ့ကြျော – Sport Gaber
ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျး ခဈြမငျးသူရဲ့ ဇနီးဖွဈသူအား သှားရောကျတှဆေုံ့ နှဈသိမျ့ပေးရငျးနဲ့ အလှူငှလှေူဒါနျးခဲ့တဲ့ ထူးခနျ့ကြျော
March 14, 2021 March 14, 2021 - by Sports Gaber - LeaveaComment
သရုပျဆောငျ ထူးခနျ့ကြျောကတော့ အနုပညာအလုပျတှေ လုပျကိုငျရငျးနဲ့ တဈဖကျတဈလမျးကနေ သူတတျတဲ့ပညာရပျလေးနဲ့ လဖွေတျလူနာတှအေား တိုငျးရငျးဆေးဖွငျ့ နှိပျနယျကာ ကုသပေးနသေူ ဖွဈပါတယျ။….
အရေးကွုံလာတိုငျးလညျး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသှေးတညျး တဈသားတညျး ရပျတညျကာ လူထုလှုပျရှားမှုမြားတှငျ ပါဝငျဆောငျရှကျနသေူတဈဦး ဖွဈပါတယျ။….
ပွညျသူတှခေဈြတဲ့ အနုပညာရှငျမြားကပါ ဒီလှုပျရှားမှုမှာ တကျကွှစှာ ပါဝငျနတောမွငျရသညျမှာ အလှနျအားတကျစရာကောငျးလှနျးလှပါတယျနျော။…
မွောကျဒဂုံမွို့နယျ လူထုလှုပျရှားမှုတှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျရငျး မမြှျောလငျ့ပဲ ကွှလှေငျ့ခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောငျး ခဈြမငျးသူရဲ့ ဇနီးထံသို့ မနကေ့ သှားရောကျကာ တှဆေုံ့အားပေးရငျးနဲ့ အလှူငှမြေားလညျး ပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။…
ဒီအကွောငျးအရာနဲ့ပတျသတျပွီးတော့လညျး ထူးခနျ့ကြျောရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ အခုလိုပဲ ရေးသားဝမြှေထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။….
မကှယျလှနျမီ မမှီဝဲနဲ့ကငျးအောငျနေ ဇာတျလမျးတှဲထဲမှ သူ့ရဲ့ဗဒေါကွီးဇာတျကောငျအား အလှနျအားပေးခဲ့တာကို ညီလေး ခဈြမငျးသူရဲ့ဇနီးပွောပွခကျြအရ ကွားသိခဲ့ရတဲ့အတှကျ အလှနျကို စိတျမကောငျး ဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။…
သူပွုလုပျခဲ့သော ဒါနကောငျးမှု ၊ သီလကောငျးမှု၊ ဘာဝနာကောငျးမှုတို့ကွောငျ့ မောငျခဈြမငျးသူနှငျ့တကှ လူထုလှုပျရှားမှုတှငျ ကှယျလှနျခဲ့ပွီးသော သူရဲကောငျးမြားအားလုံး မွငျ့မွတျသော ဘုံဌာနသို့ ရရှိရောကျရှိကွပါစေ၊…
ဒီလိုဘေးဆိုး ၊ ရနျဆိုး ၊ အန်တရာယျဆိုးမှလညျး သံသရာအဆကျဆကျ ကငျးဝေးပါစလေို့လညျး ဆုတောငျးပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့လညျး အရေးတျောပုံအောငျရမညျလို့ ဟဈကွှေးနကွေတဲ့….
ပွညျသူတှရေဲ့ ကိုယျလကျနာကငျြမှုတှကေို ကုသပေးလကျြရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ ကိုယျတိုငျကနျြးမာရေးမကောငျးဖွဈနပွေီး ရကျပိုငျးလောကျကုသမှုတှေ ရပျနားထားရတာကွောငျ့….
စိတျမကောငျးဖွဈနရေကွောငျးကိုလညျး ရှငျးပွထားပါသေးတယျ။ အားလုံးကနျြးမာပါစလေို့ ရေးသားထားတဲ့ ထူးခနျ့ကြျောရဲ့ သတငျးလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။ကရကျဒဈ
ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်း ချစ်မင်းသူရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ နှစ်သိမ့်ပေးရင်းနဲ့ အလှူငွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထူးခန့်ကျော်
သရုပ်ဆောင် ထူးခန့်ကျော်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ သူတတ်တဲ့ပညာရပ်လေးနဲ့ လေဖြတ်လူနာတွေအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် နှိပ်နယ်ကာ ကုသပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။….
အရေးကြုံလာတိုင်းလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရပ်တည်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။….
ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်များကပါ ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေတာမြင်ရသည်မှာ အလွန်အားတက်စရာကောင်းလွန်းလှပါတယ်နော်။…
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရင်း မမျှော်လင့်ပဲ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်း ချစ်မင်းသူရဲ့ ဇနီးထံသို့ မနေ့က သွားရောက်ကာ တွေ့ဆုံအားပေးရင်းနဲ့ အလှူငွေများလည်း ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။…
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း ထူးခန့်ကျော်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် အခုလိုပဲ ရေးသားဝေမျှထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။….
မကွယ်လွန်မီ မမှီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှ သူ့ရဲ့ဗေဒါကြီးဇာတ်ကောင်အား အလွန်အားပေးခဲ့တာကို ညီလေး ချစ်မင်းသူရဲ့ဇနီးပြောပြချက်အရ ကြားသိခဲ့ရတဲ့အတွက် အလွန်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။…
သူပြုလုပ်ခဲ့သော ဒါနကောင်းမှု ၊ သီလကောင်းမှု၊ ဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကြောင့် မောင်ချစ်မင်းသူနှင့်တကွ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးသော သူရဲကောင်းများအားလုံး မြင့်မြတ်သော ဘုံဌာနသို့ ရရှိရောက်ရှိကြပါစေ၊…
ဒီလိုဘေးဆိုး ၊ ရန်ဆိုး ၊ အန္တရာယ်ဆိုးမှလည်း သံသရာအဆက်ဆက် ကင်းဝေးပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့လည်း အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်လို့ ဟစ်ကြွေးနေကြတဲ့….
ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်လက်နာကျင်မှုတွေကို ကုသပေးလျက်ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေပြီး ရက်ပိုင်းလောက်ကုသမှုတွေ ရပ်နားထားရတာကြောင့်….
စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ အားလုံးကျန်းမာပါစေလို့ ရေးသားထားတဲ့ ထူးခန့်ကျော်ရဲ့ သတင်းလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Previous Article ခဈြသူရဲ့ မိသားစုဝငျကအကွီးအကဲပိုငျးထဲကမို့ဖိအားတှကွေောငျ့ နှူတျဆိတျနရေကွောငျးပွောလာတဲ့ အောငျရဲလငျး
Next Article အသားဒိုငျးလေးကိုငျပွီး ခံတပျကိုလာကူပိတျပေးတဲ့ အံ့မခမျးသတ်တိနဲ့ Gen Alphaကလေးငယျလေး